Iswiidhen iyo Oostariya oo caawa isku herdiyi doona kubbadda cagta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Iswiidhen iyo Oostariya oo caawa isku herdiyi doona kubbadda cagta
La daabacay fredag 7 juni 2013 kl 16.18
Maagalada Viena ee caasimadda dalka Oostariya ayey caawa fiidkii ka bilaaban doontaa cayaar kubbadda cagta oo dhexmareysa kooxda kubbadda cagta qaranka Iswiidehn iyo kooxda Oostariya. Cayaartani waxay qayb ka tahay tartanka isreebreebka oo ay dalalka Yurub ugu tartamayaan ka qaybgalka cayaarta horyaalka adduunka oo sannadka dambe lagu qaban doono dalka Baraasiil.
Tababaraha kooxda Iswiidhen Erik Hamrén wuxuu horay u soo bandhigay kow iyo tobanka cayaartow oo cayaarta bilaabaya. Kim Källström iyo Rasmus Elm waxay ka cayaari doonaan dhexda, halka uu Johan Elmander weerarka kala qaybqaadan doono Zlatan Ibrahimovic.
Irland, Oostariya iyo Iswiidhen wuxuu midkiiba leeyahay siddeed dhibcood, laakiin Iswiidhen waxaa u harsan hal cayaar. Sidaas awgeed ayey cayaartani Iswiidhen aad muhiim ugu tahay maadaama ay dooneyso in ay kaalinta labaad ka gasho kooxda uu Jarmalku hoggaaminayo.
Kooxda qaranka Iswiidhen guul ma ka soo hoyi doontaa cayaarta caawa?